Imibhalo kaSara Williams mayelana Martech Zone |
Imibhalo nge USara Williams
USara Williams ungusomabhizinisi osuselwe eBerlin, omaketha onguchwepheshe kwezokuxhumana nge-inthanethi. Bheka ukuqala kwakhe kwedijithali okuthandayo - Umagazini weWingman - umagazini wokuphila oku-inthanethi wabesilisa.
NgoLwesithathu, Okthoba 17, 2018 NgoLwesithathu, Okthoba 17, 2018 USara Williams
Kwakukhona isikhathi lapho uma ungakha, babefika. Kepha lokho bekungaphambi kokuba i-intanethi igcwale ngokweqile ngokuqukethwe nomsindo omningi. Uma ubukade uzizwa ukhungathekile ngokuthi okuqukethwe kwakho akuhambanga ngendlela obekujwayele ngayo, akulona iphutha lakho. Izinto zivele zashintsha. Namuhla, uma ubakhathalele ngokwanele ababukeli bakho nebhizinisi lakho, kufanele nakanjani wenze isu lokucindezela okuqukethwe kwakho kuye phambili